Repidshare premium account ၀ယ်ချင်လို. — MYSTERY ZILLION
Repidshare premium account ၀ယ်ချင်လို.
July 2009 edited March 2010 in Rapidshare Account
Repidshare premium account ၀ယ်ချင်လို.အဲ.ဒါ ဘယ်လို၀ယ်ရမလဲ paypal ကဒီနိုင်ငံမှာရ၀ူး:77::77::77:
ကျွန်တော့်မေးလ်ထဲ ကြော်ငြာ၀င်ထားတာတော့ [email protected] ဆိုတာတော့တွေ့ဖူးတယ် . . . မေးကြည့်ပါလား . . . pfingo ရော rapidshare ရော ၀ယ်လို့ရတယ်လို့ ပြောတာပဲ . . .
ကိုပရင်. ကို ပိုက်ပိုက် ဘယ်လိုပြန်ပေးရမှာလဲ ဗျ.:101::101::101:
Rapid ရဲ့ site မှာ price ကိုကြည့်ပီး၊ earn money exchange range ကိုတွက်ပါ။ အဆင်ပြေရင် တကယ်ယူမယ်ဆိုရင် process တွေဆက်ပို့ပေးပါ့မယ်။
အနော်က သုံးလစာ လိုချင်တာ ဗျ:106::106::106:
process ပို.ပေးဦးလေ bro :D:D တကယ်လိုချင်တာဗျ
အဲ တကယ်သေချာရင်တော့ ကျနော့ email ကို အကြောင်းကြားပါ။ ကျနော်စီစဉ်လိုက်ပါ့မယ်။
ကျနော့ email က princeakarit ပါ (gmail နော်)
MZ က မန်ဘာဆိုတာတော့ ထည့်ပြောနော်။ ကျနော်က မသိရင် ဖြတ်ဖြတ်ပစ်တတ်လို
add ပြီးပါပြီ ကျနော. email က [email protected] ပါ :101::101::101:
တကယ်သုံးချင်တဲ့သူ ဝယ်ဖို့ အခက်အခဲ ရှိနေရင် ကူညီပေးလို့ရပါတယ်။ တခါတလေလောက်ပဲ ဝယ်ပေးဖို့ အဆင်ပြေမယ်။ အမြဲတမ်းကြီးတော့ လုပ်ပေးဖို့ အဆင်မပြေလို့ပါ။ နောက်ပြီး မသိတဲ့သူတွေကို လုပ်ပေးဖို့ဆိုတာ ရေရှည်မှာမကောင်းဘူး။ ငွေကြေးနဲ့ပါတ်သက်ပြီး လူတွေနဲ့ မဆက်ဆံတတ်လို့ပါ။ အောက်မှာ စျေးနှုန်းလေးတွေ ပေးလိုက်တယ်။ Exchange Rate ပေါ်မူတည်ပြီး အပြောင်းအလဲ ရှိမှာပါ။ သူတို့ရဲ့ မူရင်းကတော့ pound နဲ့ပါ။ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ နောက်မှာ ရေးထားတဲ့ စ လုံး ဒေါ်လာကတော့ ခန့်မှန်းခြေပါ။
30 days -> 6.99 pounds -> ~15 SGD
90 days -> 16.99 pounds -> ~ 40 SGD
180 days -> 29.99 pounds -> ~ 70 SGD
365 days -> 54.99 pounds -> ~ 130 SGD
ဒီတစ်ခါတော့ကူညီလို့ရရင်ကူညီပေးပါအစ်ကို ပြီးတော့ညီ အစ်ကို့ ကို ပိုက်ပိုက်ဘယ်လိုလွှဲပေးရမလဲဆိုတာပြောပြပါဦးနော် :77::77::77:
If you want to buy rapidshare premium account so you can buy from speedway online service
www.speed-way.ws or phone 095178391
1 Month 15000
3 Month 35000
6 Month 60000
1 year 110000